Maitiro Ekuvaka Iyo Dhata-Inotungamirwa Tsika yekuwedzera Kambani Yako Pazasi Mutsara
Chishanu, April 9, 2021 Chishanu, April 9, 2021 Jeff Beck
Gore rapfuura raive nezvinoreva kumabhizimusi, uye iwe ungangodaro uri padanho rekukwikwidzana. Ndiine maCMOs uye madhipatimendi ekushambadzira ari kupora kubva pagore rekudzosera kumashure mari, kwaunoisa mari yako yekushambadzira gore rino inogona kukumisazve mumusika wako. Ino ndiyo nguva yekudyara mune chaiyo data-inotungamirwa tekinoroji mhinduro kuti uzarure zvirinani zvekushambadzira njere. Kwete imba yekutandarira-pamwe chete yekutandarira yemidziyo yemidziyo ine mavara akasarudzika anopesana (off-the-shelf solutions),
Chii chinonzi MarTech? Kushambadzira Tekinoroji: Kare, Ikozvino, uye Ramangwana
Mugovera, March 27, 2021 Svondo, Kubvumbi 11, 2021 Douglas Karr
Unogona kuwana kuseka mukati mangu ndichinyora chinyorwa paMarTech mushure mekuburitsa zvinyorwa zvinopfuura mazana matanhatu nezviuru pakushambadzira tekinoroji kweanopfuura makore gumi nematanhatu (kupfuura zera reblog iri… ndaive pa blogger yapfuura). Ini ndinotenda zvakakosha kushambadzira nekubatsira vezvemabhizinesi zvirinani kuti vaone kuti MarTech yaive chii, iri, uye ramangwana rezvichave. Chekutanga, chokwadika, ndechekuti MarTech inzvimbo yekushambadzira uye tekinoroji. Ndasuwa chikuru
Dhijitari Shanduko: Kana maCMOs uye maCIO Vachisunga Kumusoro, Wese Munhu Anokunda
Chitatu, Ndira 20, 2021 Chitatu, Ndira 20, 2021 Bonnie Crater
Shanduko yedhijitari yakawedzera muna 2020 nekuti yaifanira kudaro. Iyo denda rakaita magariro ekuparadzanisa maprosesa akakosha uye akamutsidzira online zvigadzirwa zvigadzirwa uye kutenga kune mabhizinesi nevatengi zvakafanana. Makambani akange asati ave neakasimba ekuvapo kwedhijitari akamanikidzwa kukudziridza imwe nekukurumidza, uye vatungamiriri vebhizimusi vakatamira kuti vawane mari parukova rwekudyidzana kwedhijitari kwakagadzirwa. Izvi zvaive zvechokwadi muB2B uye B2C nzvimbo: Iyo denda inogona kunge yakakurumidza-kufambisa dhijitari shanduko nzira
Kudzidza Tekinoroji Yakakosha seManeja weCRM: Heano Mamwe Maturu
Muvhuro, Ndira 18, 2021 Chishanu, April 23, 2021 Katarzyna Banasik
Nei uchifanira kudzidza hunyanzvi hwehunyanzvi seCRM maneja? Munguva yakapfuura, kuve wakanaka Mutengi Ukama maneja iwe waida kune psychology uye mashoma ekushambadzira hunyanzvi. Nhasi, CRM yakanyanya kuwanda tech mutambo kupfuura pakutanga. Munguva yakapfuura, maneja weCRM ainyanya kutarisisa maitiro ekugadzira kopi yeemail, munhu akasika-ane pfungwa. Nhasi, yakanaka CRM nyanzvi inyanzvi kana data data nyanzvi ine ruzivo rwekutanga